Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- विश्व
सीपीईसी परियोजनाको फराकिलो स्तर टुक्रिन सुरु र असहमति
काठमाडौं, २२ बैशाख । चीन र पाकिस्तानको कोरिडोर टुक्रिएको अवस्थामा देखा पर्न सुरुवात गरेको छ । मुख्य प्रोजेक्ट, आयोजना, परियोजना आवश्यक कोष पूरै बन्द नहोस् भनेर संघर्ष गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तान र श्रीलंकामा चिनियाँ लगानी जोखिममा
काठमाडौं, १५ बैशाख । श्रीलंका र पाकिस्तानमा जारी राजनीतिक एवम् आर्थिक संकटका कारण ती मुलुकहरुमा चिनियाँ लगानीमाथि नकारात्मक असर परेको देखिएको छ ।
अष्ट्रेलियाले २९ वटा प्राचीन कलाकृति भारतलाई फिर्ता गर्यो
काठमाडौं, ७ चैत । अस्ट्रेलियाले विभिन्न समयका २९ वटा पुरातन कलाकृति भारतलाई फिर्ता गरेको छ । यी पुरातन वस्तुहरू मध्ये सबैभन्दा प्रारम्भिक ९-१० शताब्दी शताब्दी ईस्वी सम्मको हो।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरे भारतको ‘स्वतन्त्र विदेश नीति’ को प्रशंसा
काठमाडौं, ७ चैत । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आइतवार भारतले "स्वतन्त्र विदेश नीति" पछ्याएकोमा प्रशंसा गरे र युद्धग्रस्त युक्रेनमा मस्कोमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धको बाबजुद रूसबाट कच्चा तेल आयात गरेको बताए।
श्रीलंकाको उत्तरी प्रान्तमा कृत्रिम अंग फिटमेन्ट शिविर आयोजना गर्न भारतले मानवीय सहायता प्रदान गर्ने
काठमाडौं, ३० फागुन । भारतले आइतबार देशको उत्तरी प्रान्तमा माछा मार्ने र उनीहरूका परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गरेर श्रीलंकामा मानवीय सहायता पहलहरू जारी राखेको छ।
भारत, बंगलादेश र नेपालले उप-क्षेत्रमा यात्रु, कार्गो सवारी साधनको आवागमनलाई सहज बनाउने सम्झौतामा छलफल
काठमाडौं, २५ फागुन । भारत बंगलादेश र नेपालले यात्रु आवागमन सहज बनाउन भुटानले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको बहुप्रतीक्षित बीबीआईएन मोटर भेहिकल एग्रीमेन्ट (एम. भि. ए.) को कार्यान्वयनका लागि तीन देशले हस्ताक्षर गर्ने एक सक्षम समझदारी पत्र लाई अन्तिम रूप दिएका छन् ।
भारतले मानवीय सहायताको तेस्रो खेप अफगानिस्तान पठायो
आसामले बिहारबाट भारत-बंगलादेश जलमार्गबाट पहिलो कार्गो प्राप्त गर्यो
काठमाडौं, २५ फागुन । युक्रेनमा अझै फसेका भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि केही खुसीको खबर थियो किनभने रूसले मंगलबार युद्धविराम घोषणा गरेको थियो र "मानवीय कोरिडोरहरू" उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो।
पाकिस्तान : मस्जिदमा विस्फोट, २० को मृत्यु, दर्जनौं घाइते
काठमाडौं, २० फागुन । पाकिस्तानको पेशावर सहरमा रहेको एक शिया मस्जिदमा शुक्रबार बम बिस्फोट हुँदा कम्तिमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
युद्धग्रस्त युक्रेनमा भारतले पठायो मानवीय सहायता
काठमाडौं, १९ फागुन । भारतले पोल्याण्ड हुँदै युक्रेनमा मानवीय सहायता पठाएको छ । मानविय सहायताको पहिलो चरण मंगलबार पठाएको विदेश मन्त्री हर्षवर्धन श्रृङ्लाले जानकारी दिएका छन् ।
चीनको सिनजियाङमा ‘नरसंहार’ जारी
काठमाडौं, १९ फागुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेटलाई सिन्जियाङमा उइगरहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न आह्वान गरेको छ ।
पाकिस्तानको विदेशी ऋण १३ बिलियन डलर
इस्लामाबाद, १९ फागुन । पाकिस्तान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १३ बिलियन डलरभन्दा बढी वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढेको छ ।
तिब्बतमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्न चीन सक्रिय
ल्हासा, १३ फागुन । धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथिको दमन रोक्न चीनलाई विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गरिएको छ । यसरी विश्वभरको दबाबका बाबजुद पनि बेइजिङले गुम्बा र बुद्धका मूर्तिहरू भत्काएर, तिब्बती झन्डाहरू प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै तिनीहरूको भूमि अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै तिब्बतीहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ ।
चिनियाँ ऋणमा फसेपछि श्रीलंका थप संकटमा
काठमाडौं, १३ फागुन । दक्षिण एसियाको टापु मुलुक श्रीलंका । बलियो अर्थतन्त्र रहेको श्रीलंका अहिले चिनियाँ ऋणका कारण खतरामा परेको छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रका बीच श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने भएका कारण संकट सिर्जना भएको हो ।
भारतले यसरी मनायो ७३ औं गणतन्त्र दिवस
नयाँ दिल्ली, १२ माघ । भारतले मंगलबार ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । भव्य सैनिक परेड र सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शनसहित भारतले ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाएको हो ।
भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न बेलायत सहमत
लन्डन, ११ माघ । बेलायत सरकारले बिहीबार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने समझदारी गरेको छ । यसलाई बेलायती व्यवसायहरूलाई भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सुनौलो अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।
भारतलाई हल्लाउने कुनै शक्ति छैन : मोदी
काठमाडौं, ११ माघ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको १०० औं स्वतन्ता दिवस अघिसम्म सरकारले नयाँ भारत बनाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।
चीनमा विश्वसनीयतामा ठूलो समस्या
काठमाडौं, ६ माघ । यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो जसले जनवादी गणतन्त्र चीन (पीआरसी) को विश्वसनीयता कत्तिको खराब छ भनेर देखाउँछ ।
चिनियाँ ऋणले झन् ठूलो संकटमा फस्दै श्रीलंका
काठमाडौं, ६ माघ । चीनको ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट’ ऋणी देशका लागि मन्द विष बनेको छ । ऋण लिने देशका लागि सुरुवाती दिनमा एकदमै मीठो लागे पनि बिस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका दृष्टान्त धेरै पाउन सकिन्छ ।
१ हप्तामा झण्डै ५ गुणाले बढे कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १९ पुस । भारतमा एक हप्ताको अवधिमा कोभिड-१९ का संक्रमित झण्डै ५ गुणाले बढेका छन् ।
दिल्लीमा ८४ प्रतिशत नमूना परीक्षणमा ओमिक्रोन
काठमाडौं, १९ पुस । भारतको दिल्लीमा गरिएका नमूना परीक्षणमध्ये ८४ प्रतिशतमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ ।
भारतले कोविड १९ खोप को लागि तय गरेको लक्ष्य प्राप्त नगरेको प्रतिवेदन विरुद्ध सरकारको खण्डन
काठमाडौं, १९ पुस । गत वर्ष जनवरी १६ तारिखमा कोभिड-१९ खोप अभियान सुरु भएदेखि, भारतले आफ्नो योग्य जनसंख्या को ९०% भन्दा बढी नागरिकलाई पहिलो डोज र ६५% लाई दोस्रो डोज प्रदान गरेको छ।
नँया वर्ष को अवसरमा एलएसीमा भारतीय र चिनियाँ सेनाद्वारा मिठाइ आदानप्रदान
काठमाडौं, १८ पुस । शनिबार नँया वर्ष को अवसरमा पूर्वी लद्दाख सहित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) स्थित १० वटा सीमा नाका मा भारतीय र चिनियाँ सेनाले मिठाइ र अभिवादन आदानप्रदान गरेका छन्।
सन् २०२२ सम्ममा त्रिपुरास्थित भारत-बंगलादेश सीमामा पूर्णरूपमा तारबार लगाइने: बीएसएफ
काठमाडौं, १८ पुस । उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरामा रहेको भारत-बंगलादेश सीमानामा पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)ले यस वर्ष त्रिपुराको ८ सय ५६ किलोमिटर सीमानामा पूर्ण रूपमा तारबार लगाउनेछ।
भारत द्वारा बंगलादेशलाई वाराणसीसम्म आन्तरिक जलमार्ग प्रणाली प्रयोग गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, १८ पुस । बंगलादेशसँग दुईतर्फी व्यापार बढाउने उद्देश्यका साथ भारतले ढाकालाई वाराणसीसम्म आन्तरिक जलमार्ग प्रणाली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ।